Ungawana Sei SEO Muongorori | Martech Zone
Maitiro Ekutsvaga iyo SEO Mubatsiri
Chitatu, September 14, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Mangwanani ano ndanga ndiri parunhare neshamwari yanga iine kambani yaimushevedza kuti imupe mabasa akadhura eSejini Injini yekuvandudza. Aifarira kwazvo nezve mukana, pakupedzisira achiwana basa rakakura raizomupa mukana wekuti afumurwe Highbridge aigona… asi nechidimbu chemubhadharo. Kana zviri izvo zvakanaka, heck… tinogona kusaina!
Chinhu chekutanga chandinoita kana mumwe munhu akanakidzwa seicho chiongororwa yavo yekutsvaga injini masosi uchishandisa chishandiso senge Semrush. Iwe uchaona mhedzisiro kurudyi. Zvichitaurwa zviri nyore, mhedzisiro iyi inosiririsa. Ndakavhara zita rekambani iri chinzvimbo chechina (ugh!) Uye ivo havana chinzvimbo mushe (4 kana pamusoro) pane imwechete izwi!
Katsamba kamwe pane izvi… ndinokurudzira kuti uvatarise pane saiti senge Semrush nekuti kambani yauri kutsvaga inogona kunge isingakwanise kukwikwidza mazwi akadai se "SEO". Highbridge, semuenzaniso, mamaki pamatemu ane hukama ne New Media kushambadzira. Isu tinoita rimwe basa rinonakidza nevatengi vedu vanovaisa muchimiro, asi icho chingori chishandiso mubhokisi redu rematurusi. Tinoziva kuti a muchinjika-chiteshi kushambadzira zano iyo inosanganisa ese anoshanda masvikiro (kusanganisira SEO) anoshanda zvakanyanya. Zvisinei, hapana mubvunzo pakuongorora mitsva yekutsvaga iyo isu tinoziva chaizvo zvatiri kuita.
Tsvaga Injini Optimization vanachipangamazano vari, pamwe, ari nyore kuvamazano muindasitiri kuti vaone humbowo pa… usatarise kupfuura injini yekutsvaga!
Kufuridzira Kushambadzira Maitiro